Gaa Collegelọ Akwụkwọ ndị enyi na ndị agha na ndị agha »Hodges U
N'ụlọ ma ọ bụ ná mba ọzọ, anyị na-akwado ndị agha anyị!
Na Mahadum Hodges, ị ga-ahụ na ịbụ Onye Enyi na Enyi abụghị naanị ihe anyị na-ekwu, ọ bụ ọkwa nkwado nke karịrị klaasị. Site na ụlọ ọrụ ndị agha raara onwe ha nye, ebe a na-adọba ụgbọala, mmemme pụrụ iche, na ọrụ nkwado na-aga n'ihu, anyị na-egosipụta ntinye anyị nye gị na ezinụlọ gị site na echiche mbụ na ọkwa ndị isi.
Na mgbakwunye, a matala anyị dị ka -2019lọ akwụkwọ ndị enyi na enyi na 2020-XNUMX nke ndị agha, 2018-2021 Oge ndị agha kacha mma maka Vets College, Yellow Ribbon Sonyere, Zipu 911 GI Bill® na Schoollọ Akwụkwọ Di na Nwunye nke Enyi na Enyi maka nraranye anyị imeziwanye ndụ nke anyị Ndị agha nọ n'ọrụ, Veterans, na Ezinụlọ Ndị Agha.
Hodges bụ nhọrọ dị elu maka ụmụ akwụkwọ ndị agha na ndị agha
Usoro Ọmụmụ nke Ndị Ọrụ.
Yabụ Ribbon Sonyere.
Aha ya “40lọ akwụkwọ kacha mma XNUMX kacha elu na Florida".
Ndị agha / ndị agadi na ndị enyi ha w / Lọ Ọrụ Ndị Agha Veteran.
Pasent 12 nke ụmụ akwụkwọ niile ejeela ozi na ndị agha.
Akpọrọ Oge agha kachasị mma 2018-2020.
Mahadum na-abaghị uru.
Otu klas kwa ọnwa Hyper lekwasịrị anya Format mgbe ị na-ekwe Ndebanye aha zuru ezu ma ọ bụ nke oge.
Agbakwunyere Asambodo n'ime anyị Mmemme Degree.
30 Years Ijere Mmụta Kasị Elu ụmụ akwụkwọ.
Klas na-enye Online, Na-Campus, Blended, ma ọ bụ TEC formats. TEC klas na-enye gị ohere ịme ụfọdụ klas na-ebi n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Nkwado ndị agha na-agafe agafe na klaasị
Mahadum Hodges na-anya isi na ụmụ akwụkwọ agha anyị na ụmụ akwụkwọ ochie ọ gosipụtara. Site na ndị agha ewepụtara na ebe ndị a na-adọba ụgbọala ka ha raara onwe ha ime ụlọ, anyị kwenyere n'inye ọnọdụ dị mma maka ndị agha anyị na ụmụ akwụkwọ ndị agha mgbe anyị nọ n'ogige anyị.
Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ nkwado, enyemaka na usoro ntinye akwụkwọ anyị, enyemaka enyemaka ego maka ndị ọkachamara na-enyere aka, yana nyere aka n'ịmepụta ụzọ maka ịga nke ọma gị. Anyị maara mgbanwe site na onye agha gaa na nwa akwụkwọ anaghị adị mfe mgbe niile mana anyị nọnyeere gị usoro ọ bụla.
Nkwado Ezinụlọ Ndị Agha
Anyị na-anabata ndị di na nwunye ndị agha na ezinụlọ ndị na-achọ nkwado na ebe ha nwere ike ịkpọ n'ụlọ mgbe ndị ha hụrụ n'anya na-eje ozi ndị agha. Abụ a Ulo akwukwo ndi agha kacha elu, anyị na-enye ọtụtụ nke otu ọrụ ahụ maka ndị agha ochie na ezinụlọ ha.
Ma gị onwe gị ma ọ bụ ezinụlọ gị chọrọ nkwado na enyemaka na ego, ịchọ ọrụ, ndụmọdụ ahụike ọgụgụ isi, ma ọ bụ nkwado mgbanwe, anyị bịara inyere gị niile aka. Enwere ihe omumu na ulo akwukwo na n’ime obodo. Ihe onwunwe a na-enye ihe ngwọta maka nsogbu ọ bụla ị nwere ike iche dịka onye bụbu onye agha. Anyị na-enye mmemme oge niile na nke oge, ọtụtụ n'ime ha nwere ike iji ntanetị. Yabụ ọ bụrụgodi na ị maghị oge ole ị ga-anọ na mpaghara anyị, ị ka nwere ike mechaa ogo gị. Anyị lekwasịrị anya na ihe ịga nke ọma gị, anyị bịara iji nyere gị aka ịmepụta ndụ ị chere.
Mmemme Degree Kachasị Anya Maka Ndị Mmụta Agha:
Onye Nlekọta Ọgwụgwọ Na-ahụ Maka Ahụ
Mmemme Degree Online
Enyemaka nkuzi maka ụmụ akwụkwọ na ndị agha
Iji gị VA Uru
Na Hodges, anyị maara na ọ dị gị mkpa iji uru VA gị. Anyị nwere ahụmahụ n’inyere gị aka ijikwa usoro ngwa post-9/11 Gi Bill®. Ma ị ruru eru inweta uru 100% ma ọ bụ ọkwa ọdịiche dị iche, anyị na-agba mbọ inyere gị aka ịchọta ọtụtụ ego dị ka o kwere mee maka agụmakwụkwọ gị. Ọ bụ ya mere anyị ji esonye na Mmemme Ribbon Yellow nke Ngalaba Veterans Affairs nyere nke na-enyere aka ịmechi ọdịiche dị n'etiti post-9/11 GI Bill® na mkpa ego maka agụmakwụkwọ gị dị elu.
Ndị ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike kwesịrị ịgwa onye ọrụ ha na-ahụ maka agụmakwụkwọ ma ọ bụ onye ndụmọdụ ndị agha ka ha nweta nnabata tupu ị debanye aha na Mahadum Hodges. HU nnabata na ndị ndụmọdụ enyemaka ego dịkwa maka ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Ego nkuzi ndị agha
Mgbe ịhọrọ Hodges, ị ga-enweta a nkuzi ego nke $ 100 kwa awa akwụmụgwọ maka ndị lagoro ezumike nka na-erughị eru maka uru agụmakwụkwọ VA ma ọ bụ ego nkuzi ọzọ. Imirikiti ndị agha lagoro ezumike na-enweta elele agụmakwụkwọ n'etiti 40 na 100 percent.
Anyị na-enyekwa ndị ọrụ agha ka ha dọọ ndị nkuzi ego. Jụọ anyị otu ị ga-esi enweta Nbelata $ 250 kwa elekere iji kwụọ ụgwọ akwukwo omumu anyi.
Na mgbakwunye, ndị ọrụ VSC anyị mara ọrụ ga-arụsi ọrụ ike iji nyere gị aka ịmata ndị enyemaka ego nke ị ruru eru ka ị wee nwee ike ịme nzọụkwụ ọzọ iji nweta Yourga nke Ọma gị. Anyị bụ otu n'ime ọtụtụ mahadum ndị na-enye ọrụ maka ndị agha anyị na-aga agha, anyị nwekwara obi ụtọ ịnọ ebe a iji jeere gị ozi ka ị na-eme nzọụkwụ ọzọ na ọrụ gị.
Ego Enyemaka nke Ndị nkuzi agha
Enyemaka Enyemaka (TA) ego bụ ihe pụrụ iche, pụrụ iche nke enyemaka ego maka ndị otu na-ahụ maka ọrụ. A na-etinye uru TA na akaụntụ ụmụ akwụkwọ tupu enyemaka enyemaka ego ọ bụla onye a na-amụrụ ihe ruru eru ịnata.
A na-agbakwa ụmụ akwụkwọ ume itinye akwụkwọ maka enyemaka ego iji chọpụta ihe ndị ọzọ ha tozuru ịnata. Iji nweta enyemaka ego gọọmentị etiti, steeti, na ụlọ ọrụ (gụnyere ọtụtụ agụmakwụkwọ), mezue Ngwa Free maka Enyemaka Ndị Mmụta Federal (FAFSA). Iji tinye maka enyemaka ego, ịkwesịrị ịmepụta Federal Aid ID ma ọ bụ FSA ID na Weebụsaịtị FSAID ma nyefee FAFSA na fafsa.ed.gov.
Echegbula ma ọ bụrụ na Enyemaka Mmụta ma ọ bụ Enyemaka Ego na-ada ụda. Ndị ọrụ Hodges 'Veterans Services Center bụ ebe a iji nyere gị aka ya na akwukwo nkuzi gi ga - eduzi gi site na usoro itinye ego n 'akwukwo. I nwere ike ime nke a!
Enyemaka nke nkuzi ụgbọ elu
Nwere ike itinye akwụkwọ maka enyemaka akwụkwọ na ntanetị na Forcelọ Ọrụ Agụmakwụkwọ Virtual Air Force. Kwesịrị ịmepụta aha njirimara na paswọọdụ tupu ịnweta ịnweta TA online.
Iji tinye akwụkwọ maka TA, soro usoro ndị a:
Họrọ Reason maka arịrịọ
Họrọ Aha Schoollọ Akwụkwọ
Tinye Oge Oge
Tinye Ozi Ozi
Tinye Ndebanye aha ụgwọ
Nyochaa TA Ozi na Nyefee arịrịọ
Mgbe arịrịọ gị nabatara, ị ga-enweta ọkwa nke ụdị TA akwadoro. Mpempe akwụkwọ akwadoro ga-enwe ma mbinye aka a kwadoro. Na mmechi, ikwesiri izipu otu ụdị ụdị akwụkwọ TA emere ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka ego ego.
Tinye maka Enyemaka Enyemaka nke Ikuku
Enyemaka nke nkuzi ndị agha
Rịọ Enyemaka Mmụta
Mgbe arịrịọ gị nabatara, ị ga-enweta ọkwa site na GoArmyEd.
Ọ bụrụ na anabataghị arịrịọ TA, GoArmyEd ga-enye ihe kpatara ya na nhọrọ.
N'ikpeazụ, ị ga-ezipụ otu akwụkwọ nke ụdị TA akwadoro na Office nke Cashier's Office.
Tinye maka enyemaka nkuzi nkuzi ndị agha
Enyemaka Maka nkuzi ụgbọ mmiri
Kpọtụrụ onye ndụmọdụ Navy Navy nke na-ahụ maka ịnata ndụmọdụ agụmakwụkwọ na iji chọpụta usoro ọmụmụ a ga-achọ maka enyemaka nkuzi.
Mezue ụdị ngwa TA wee laghachi na Officelọ Ọrụ Navy Navy maka nhazi.
gaa Leta Weebụsaịtị Navy College maka ozi ndị ọzọ.
Tinye maka enyemaka maka enyemaka ndị agha mmiri
Enyemaka Enyemaka Maka Mmiri Mmiri
Ga-enyerịrị akwụkwọ maka ịnata ikike ederede maka TA site na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị tupu ị debanye aha.
Gị usmc-mccs.org maka ozi ndị ọzọ.
Tinye maka Enyemaka Enyemaka Maka Mmiri Mmiri
Enyemaka nkuzi nkuzi n'ụsọ osimiri
Clọ ọrụ USCG na US Naval Education na Ọzụzụ Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ Ndị Ọrụ na-ejikwa Enyemaka Mmụta.
Guardlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Coastsọ Oké Osimiri na-akwado TA Ngwa ma na-ewepụta ụdị ikike ikike TA.
Ga-eziga otu ụdị ụdị akwụkwọ TA akwadoro na Office nke Cashier's Office.
Gaa na: na Weebụsaịtị Navy College ma ọ bụ na VA Uru weebụsaịtị maka ozi ndị ọzọ.
Tinye maka VA Uru
Uzo ndi ozo nke akwukwo nkuzi
Enyemaka akwụkwọ abụghị naanị isi iyi nke enyemaka ego nke ụmụ akwụkwọ agha na ndị agadi nwere. E nwere ọtụtụ ụdị enyemaka ego, gụnyere enyemaka na agụmakwụkwọ, ọmụmụ ihe gbasara ọrụ, na mgbazinye ego.
Mmemme Enyemaka Ego nke dịnụ gụnyere:
Ego Federal Pell Grant
Enwere ike inweta ohere inweta ọzụzụ nke Federal
Enyemaka Enyemaka Ndị Mmụta Florida
Mmemme Nkuzi Ọdịnihu nke Florida
Mahadum Hodges scholarships
Ọmụmụ Ọrụ Ọchịchị Federal
Ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ / Federal Direct Student Loans
Maka ama ndị ọzọ, gaa na Hodges U peeji nke enyemaka ego.
Mụta maka enyemaka ego nke HU
Mgbe ị gara Mahadum Hodges, anyị na-akpọ gị oku ka ị nọrọtụ oge na Veterans Services Center (VSC) ebe ị ga-ahụ n'onwe gị etu ndụ dị na Hodges. Ebumnuche nke Dr. Peter Thomas Veterans Services Center bụ inye ndị na-eme ochie na ezinụlọ ha nnabata na ịkọwa ihe. Na Office anyị Veteran Services (VSC), ị ga-enweta nkwado na ozi metụtara ego agụmakwụkwọ yana ntuziaka maka mgbanwe maka ndụ ụmụ akwụkwọ na nke ndị nkịtị. Ma ị gara ụlọ akwụkwọ Naples ma ọ bụ Fort Myers, ma ọ bụ ọbụlagodi na ntanetị, ị ga - ahụ ndị ọrụ ndị na-ahụ maka ndị agha Veterans dị njikere inyere gị aka.
Gini mere VSC na Hodges ji di oke mkpa? Anyị achọpụtala na otu n’ime nsogbu kasịnụ ụmụ akwụkwọ anyị nọ na ya na-enwe bụ mmetụta nke ịbụ ndị otu na nzube. Anyị ghọtara na ọtụtụ ndị agha lagoro ezumike na-eche mmekọrịta mmekọrịta ha nwere mgbe ha na-arụ ọrụ ma mara na ị na-anwa ịchọta usoro ọzọ na ndụ gị. Obi sie gị ike, ka ị na-ebighachi n'ime ndụ ndị nkịtị, ị nọ na ezigbo ụlọ ọrụ. Earl Hodges, onye aha mahadum ahụ, bụ onye agha ochie ma nwee obi ụtọ banyere ịnye agụmakwụkwọ pụtara ìhè maka ndị agha anyị, yana ọtụtụ ndị nlekọta, ngalaba na ndị ọrụ na Hodges U bụ ndị lagoro ezumike nka.
Ndị ọrụ Center Centre Services Center nọ ebe a iji nyere gị aka na mgbanwe a na-ama aka site n'inye ebe ndị agha anyị ga-ezukọ ma kwuo maka ahụmịhe ha. Ohere ịmara ndị otu ọrụ agha ndị ọzọ ga - enyere gị aka ịchọta echiche nke ịbụ onye ịkwesịrị ịme nke ọma na ebumnuche agụmakwụkwọ gị ka elu.
Onye bụ Dr. Peter Thomas?
Anyị kpọrọ aha anyị Veterans Services Center ka Dr. Peter Thomas, onye na-akọ akụkọ mmeri na Agha Warwa nke Abụọ nke bụkwa onye Naples Resident site na 1996 ruo 2016. Na 1943, mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ sonyeere United States Army wee jee ozi ya na Ngalaba Na-ahụ Maka Ngwá Agha Mbụ na mkpọsa ise Europe. Thomas nwetara ọtụtụ onyinye maka ọrụ ya, gụnyere kpakpando agha ise, otu maka mkpọsa ọ bụla, Bronze Star, Purple Heart, Unit French Croix de Guerre, na onye Belgium Fourragère.
Thomas nọrọ afọ 13 dị ka arịlịka akụkọ maka CBS tupu ọ gawa ịchụso ọrụ nyocha ya na ịkọ akụkọ oge niile. Thomas gara n'ihu na-arụ ọrụ akụkọ ya ma nyekwa ya olu maka ọtụtụ mkpọsa na mmemme telivishọn, akwụkwọ akụkọ na netwọkụ egwuregwu dịka ESPN. Ọbụna o nyere olu maka Philips HeartStart akpaghị aka mpụga defibrillator (AED).
Ọchịchọ Thomas nwere maka ndị agha ahụ akwụsịghị, na 2004, Hodges gụrụ ya Onye Enyemaka nke Afọ. N’otu afọ ahụ, a kpọkwara ya Dọkịta na-asọpụrụ nke Akwụkwọ Ozi Ha. Ọ bụ ezie na Peter nwụrụ n'April 2016, ihe nketa ya dị na Peter na Stella Thomas Scholarship, nke na-enye nkwado ego nye ndị agha na-aga agha na-agbaso ogo mmụta ma ọ bụ nnabata.
Christin Olsen: Combat Veteran na Proud Hodges U Gụsịrị akwụkwọ
Kedu nsogbu kachasị chere gị ihu na otu ị si merie ya?
“Mgbe m lara ezumike nká, ọ na-esiri m ike ịkwụsị. Anọ m ọtụtụ ọnwa n'ụlọ na-enwe nkụda mmụọ na-adị ka ndụ m ọ gaferela afọ iri atọ. Enwere m atụmatụ na ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ maka ndụ m. Mentla ezumike nká n'ụlọ ọgwụ nke ọrụ m hụrụ n'anya nke ukwuu abụghị otu n'ime ha. Otu ụbọchị, mgbe m nọ na pajamas m, n'ehihie, achọpụtara m na nwa m nwoke na-eickingomi ihe m na-eme, ọ bụkwa mgbe ahụ ka ọ dakwasịrị m - nke a abụghị nwanyị m chọrọ ka nwa m chọọ. Ya mere, amalitere m nyocha kọleji dị na mpaghara wee hụ Mahadum Hodges n'anya. Ndụ agwụbeghị m, ọ ka na-amalite amalite! ”
Kedu ihe ịnata akara na Hodges pụtara gị?
“Ọ pụtara ọtụtụ ihe. Echere m na ọ ga-emepe ọtụtụ ọnụ ụzọ ma nyere m aka ịchọta ọrụ ọhụrụ m ga-ahụ n'anya. Obi na-atọ m ụtọ maka ọdịnihu m na ihe niile ọ ga-eme m. ”
Kwado ndị agha anyị
Anyị na-enye mmemme agụmakwụkwọ yana nke Veterans Center maka ụmụ akwụkwọ ndị agha anyị na ezinụlọ ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ndị agha anyị, pịa ebe a iji nye aka:
Kọntaktị Veterans Center
Boulevard Ọchịchị nke 4501, Uzoigwe, FL 33966
Ekwentị: (239) 482-0019 Fax: (888) 320-7431
Kpọtụrụ Ndị Ọrụ Ndị Ochie